လီဗာပူးတို့ အာဆင်နယ်ကို ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ကွင်းဘေးစည်းက အချင်းများခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းပြခဲ့ကြတဲ့ ကလော့နဲ့ အာတီတာ - xyznews.co
လီဗာပူးတို့ အာဆင်နယ်ကို ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ကွင်းဘေးစည်းက အချင်းများခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းပြခဲ့ကြတဲ့ ကလော့နဲ့ အာတီတာ
ယာဂန်ကလော့ဟာ မနေ့ညက အာဆင်နယ်ကို ၄-၀ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အတွင်း ပြိုင်ဘက်နည်းပြ မီခဲလ်အာတီတာနဲ့ ကွင်းဘေးစည်းမှာ အချင်းများခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။ တီမီယာဆု အပေါ် ဆာဒီယိုမာနေး foul လုပ်ခဲ့ချိန်မှာ အာဆင်နယ် bench ဟာ ဆီနီဂေါ တိုက်စစ်မှုးကို အဝါကတ် ပြသဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာကို ကလော့ဘက်က ပြန်လည် ငြင်းခုန်ခဲ့ပြီး တဆက်တည်းမှာပဲ အာတီတာနဲ့လည်း ပြင်းထန်တဲ့ အချင်းများခဲ့ကြပါတယ်။
နည်းပြ နှစ်ဦးရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အချင်းများမှုကြောင့် နှစ်ဘက်အသင်း နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေ ဝိုင်းဆွဲခဲ့ဲရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ကလော့နဲ့ အာတီတာ တို့ အဝါကတ်တွေ ပြသခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် အန်ဖီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုက ပိုမို ကျယ်လောင်လာခဲ့သလို လီဗာပူးရဲ့ ကစားအား ကလည်း ပိုကောင်းလာခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရပြီး လီဗာပူးဟာ ပွဲကို ထိန်းချုပ်ကာ အာဆင်နယ် ဘက်ကို ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားတွေ တောက်လျှောက် ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် မာနေးဟာ ပထမပိုင်း မပြီးခင် ခေါင်းတိုက်ဂိုး သွင်းယူခဲ့ပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာ ပိုကောင်းလာခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အတွက် ဂျိုတာ ဆာလား မီနာမီနို တို့ကလည်း ဂိုးတွေ သွင်းယူပေးခဲ့ကာ အန်ဖီးမှာ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲကို ရယူခဲ့ပါတယ်။
အာတီတာနဲ့ အချင်းများခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ကလော့က “ဒီကိစ္စဟာ သိပ်ပြီး ကြီးကြယ်တဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒီကိစ္စကို ပြောပြသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကတော့ တကယ် ရှင်းလင်းပါတယ်။ ဘာမှ ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကစားသမား ၂ ဦး အပြိုင်ခုန်ခဲ့ကြပြီး တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မထိခဲ့ကြပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ foul ဘော မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ အာဆင်နယ် အရန်ခုံတန်းဟာ ဒီအတွက် အပြင်းအထန် စောဒကတက်ခဲ့ကြတာကြောင့် ကျွန်တော်က ‘ဒီအတွက် မင်းတို့ ဘာလိုချင်လို့လဲ? ဘာလိုချင်လို့လဲ?’ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ထိတွေ့မှု မရှိခဲ့ပေမယ့် သူတို့ အားလုံးဟာ ဆာဒီယိုကို အဝါကတ် ထိစေချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ အားလုံးဟာ ဆာဒီယိုကို အဝါကတ်ထိအောင် ကြိုးစားမှုတွေ အပေါ် ကျွန်တော် စိတ်ပျက်နေပါပြီ။ သူဟာ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကစားတဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ပြိုင်ဘက်ကို ထိခိုက်အောင် foul လုပ်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မှတ်မိမလား မသိပါဘူး။ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်နဲ့ ပွဲတုန်းကလည်း သူဟာ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ အဝါကတ် ထိခဲ့ကာ လုံးဝကို out of game ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အက်သလက်တီကိုနဲ့ ပွဲတုန်းကလည်း ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ သူ့ကို လူစားလဲခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ သိပ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော် ဒီလို ပြောခဲ့တာပါ။” လို့ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
အာတီတာကတော့ “ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ သူ့အသင်းအတွက် ကာကွယ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ့်အသင်းအတွက် ကာကွယ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပါပဲ။ ဒီကိစ္စဟာ ပြိုင်ဘက်ကို အကူအညီ ဖြစ်စေခဲ့သလား ဆိုတာ မသိပေမယ့် အန်ဖီးရဲ့ atmosphere ဟာ ပွဲအစကတည်းက အရမ်းကို ကောင်းနေခဲ့တာပါ။ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ဒါမျိုးကို မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီကိစ္စဟာ ကြီးမားတဲ့ ခြားနားချက် ဖြစ်စေတယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ ပွဲအပြီးမှာ ကျွန်တော် ကလော့နဲ့ စကားပြောခဲ့ပြီး သူ့ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ကွင်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။” လို့ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ပရိတ်သတ်ဟာ ပိုမို အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီ atmosphere ဟာ လီဗာပူးကို များစွာ အကူအညီ ဖြစ်စေခဲ့သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကလော့က “စီစဉ်ထားတာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ဒါဟာ အကူအညီ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်လည်း အိုကေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးဟာ တစ်ချိန်လုံး ဖြစ်နေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ ကွင်းဘေးစည်းမှာ စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်လေ့ ရှိပေမယ့် တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ ကွင်းဘေးစည်းမှာ အချင်းများတဲ့ ကိစ္စမျိုးဟာ သိပ်ပြီး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ မရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ပွဲကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့ မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ပရိတ်သတ်ရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော့်ကို ပွဲအစကတည်းက defend လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် အသင်းကိုလည်း တွန်းအား ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ဒါဟာ လုံး၀ အိုကေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စမျိုးဟာ တစ်ချိန်လုံး ဖြစ်နေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။” လို့ ပြောသွားပါတယ်။
Previous Article တကယ်ထုတ်ခံရတော့မယ့် ဆိုးရှား ၊ အဖွင့်လှတဲ့ နည်းပြသစ်များ ၊ ဂိုးစသွင်းတဲ့ မက်ဆီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article အဖွင့်ပွဲ အနိုင်ရယူပြီး စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ #ဂျရတ်